(Faalo) Wadanka Giriiga Magdhow 278,7 bilyan oo Yuuro ah ka raba Jarmalka. | BALIBUSLE.COM
« Waa kuma C/qadir Shire Gudoomiyaha Cusub ee Mudug.?
Madaxtooyada Puntald oo ay Booqdeen Wafdi Safiiro kakala socda… »
(BB)Waa markii ugu horeysay oo uu wadanka Giriiga sheego qiimaha lacagta uu rabo in magdhow loo siiyo, lacagtaas oo ah mid uu kudalbanayo dagaalkii labaad khasaarihii kudhacay kadib markii ciidankii uu hogaamin jiray Hitler ee Nazi ahaa ay qabsadeen wadanka Giriiga siiba caasimada wadankaas. lacagta ay rabaan in magdhaw loo siiyo ayay kusheegeen 278,7 bilyan oo Yuuro.
1941-1945 ayay udhaxaysaa xiliga aysheegteen Giriiga in lagu xadgudbay. lacagtaan ayaa laga rabaa wadanka Jarmalka.
dalabkaa magdhaw ee ugu dambeeyay ayaa yimid kadib markii wadanka Giriiga uu ku jiro xili lacagta ay kafaaruqday koontooyinka banuugtiisa, khasaarihii uu ugaystay dhaqaala xumidii ku dhufatay wadamo badan laakinse uu wadankaas ugu darnaa Yurub marka la ‘eego inteeda kale.
sida ay sheegayaan wariyasha caalamiga ee ku xeeldheer umuurahan dhaqaalaha, lama filayo in dowlada Germalka in ay kasoo jawaabto ama Wax falcelis ah ka samayso dalabkaan.
in cod hoose loogu jawaabaa waa arin suura gal ah waayo Jarmalka waxaa ay u arkaan in ay tahay daan daansi taariikheed oo lagu dulmayo jarmalka, dhanka kale waxaa ay umuuqataa in ay kalunsan tahay Giriiga dulqaadkii, taaasna ay sabab unoqoto in ay isaga baxaan dhamaan in ay isticmaalan lacagta Yuuro(Euro).
Jarmalka ayaa marar badan ku celcelshay in ay gabow tahay dalbashada Giriiga aysana buuxin shuruuda laga rabay, sida ay sheegeen quburada xaga sharciga Gariiga waxaa ay xaq uleedahay in ay gudbiso cabashadeeda iyo dalabkeeda, laakiinse waxba uma tarayo waayo waxaa laga yaabaa in uu qaato sanado badan taasina kama caawin karto Gariiga lacag la’aanta haysa imika ee ay ugu baahan yihiin dhaqaalo deg deg ah in ay helaan.
is maandhaafka waxaa weeye in in ay Giriiga ku adkeysanayaan in dhaawicii kaga yimid xiligii dagaalka labaad laga siiyo magdhow, halka dowlada Jarmalka ay leedahay ma aha lacagta waxa in laga wada hadlayo in labixiyo ama layska daayo ee waxa weye sababta loo bixinayo.
Hitler ciidankiisa ayaa Dilay 130,000 oo giriig ah dagaalkii labaad ee aduunka. waxaa kaloo ay udireen 70,000 oo yuhuuda girriiga ah xerada KZ, halkaas oo dadkii ay isugu keneen 300,000 kamid ay ku dhinteen qabow iyo gaajo.
marar badan ayay weydiisteen xiligaan adag ee ay ku jiraan Giriiga, marka loo eego dhaqaalo xumida wadanka dadka wadanka Gariiga waxaa ay ku balaan bexeen in lasiiyo magdhow marara badana waxaa ay soo qaateen calaamadii Naziyiinta ee dagaalkii labaad ay wateen.
kala soco wixii ka dhacaya agagaarka duunka